Semalt Expert Anopa Zvinokosha SEO Mazano Panoita Kuti Uvandudze Nayo Website Yako Inoshanda
Kutaura zvazviri, pane zvakawanda zvezvinhu zvinokosha zvinofanira kuonekwa kana iwevari kusika webhusaiti. Kubva pakuronga mapeji kusvika kushandisa mahwendefa chaiwo, zvinhu zvose zvinokosha kana zvasvika pakuziva nzvimbo yako painternet. Uyezve, zvakakosha zvikuru kune vatengi vako / vaverengi kugutsikana. Zvose izvi zvinogona kuitwa nenzira yakarurama narubatsiro rwekutsvaga injini (SEO) mitemo yekugadzirisa mawebhusayithi. Kusangana nezvinodiwa zvekutsvaga, webhusaiti yako inowanikwa yakakwiriramukutsvaga mhinduro.
Matambudziko, ayo mazhinji emakambani anotarisana nawo, ndeyekuti injini dzinotsvagakugara vachivandudza nekushandura maitiro avo zvekuti zvinodikanwa nebasa reyanyanzvi, avo vari kusvika-ku-tambo nemashoko ekupedzisira mumunda we SEO. Inonzi Abgarian, Mutengi Wekugutsikana Kwevatereji Semalt Digital Services inotsanangura zvaunogona kuita kuti uvandudze webhusaiti yako.
Shandisai Zvifananidzo zveWebhu
Waiziva here kuti mifananidzo yese iri pawebsite yako inogona kugadziriswa? Ehe,zita raunopa mufananidzo uye ukuru hwemufananidzo, zvinogona zvose kuratidza zvakanaka SEO maitiro. Iwe unogona kuchinja mapikicha ako, uye unoita kuti vatsvakeinjini inoshamwaridzana nokuisa-kuisa mifananidzo yese. Apo injini dzekutsvaga dzichitsvaga webhu, zvifananidzo zvako zvewebhangi zvichabatanidzwa mukati sechikamu chemigumisiro. Kuderedza ukuru hwemifananidzo yako kunobatsira kukurumidza kubudisa webhutta nekukurumidza, izvo zvingagadzirisa iwe webhusaiti yako. Ipa mufananidzo akeyword-centric title iyo inobatsira vatengi kuwana chavari kutsvaga.
Bvisa Zviri Mukati
Wakambotarisa pane webhusaiti, kuti uwane kuti unodakuripa kuti uwane nzvimbo yacho? Zvakanaka, vanhu vakawanda vanobva kune dzimwe nzvimbo uye havazodzokazve. Iwe hausi kuti webhusaiti yako ive imwe iyo vanhu vanobvakunyange vasati vaona zvauri kupa! Kana iwe uchida kuva nenzvimbo yewebsite yako yakabviswa, zvichida kune nhengo dzako dzakanyoresa,kuvhara chikamu ichocho chete. Siya peji yekunyorera pasina. Bvisa maitiro ose asina kufanira, uye maonesheni ekuona, uyewo mapups..
Kutsvaga injini kunoda mawebsite kuti avandudze zvinyorwa zvavo nguva dzose kuitira kutivanogona kupa vashandisi vakavimbika uye mashoko panguva yakakodzera. Sezvo zvakadaro, mawebsite anoedza kuvandudza zvinyorwa zvavo nguva dzose,inonyanya kunzwisiswa ne-algorithms. Kuva nebhuku ndiyo nzira yekudzivirira yekuti webhusaiti yako haina kubviswa kubva pakufungisisayakakwirira yepamusoro.
Sarudza Mazita Akanaka eIndaneti
Ita URL yako yekutsvaga injini yakanaka kuburikidza nekubatanidza mazano aunopamune URL, kana nokusarudza zita rakanaka re URL yako. Kusanganisira nzvimbo kana nzvimbo munzvimbo yako URL inogona kubatsirawo injini dzokutsvagakuti ubatanidze vatengi vako kune website yako.
Nhamba Yemafambisi Anogadzirwa
Munyika iri kuramba ichitambaira, Google ikozvino inokoshaalgorithm for mobile friendly websites. Nokuda kwechikonzero ichi, webhusaiti yako inofanira kunge yakanyatsogadziriswa pamusana pemafoni kana kuti panjodzi inopomerwa. Yakoweb designer inokwanisa kukwanisa kusarudza webhu rakanaka rakagadzirirwa foni. Usakanganwa kuisawo FAQ pane chikamukune avo vanosarudza izwi rinotsvaga tsvakurudzo.
Isai muchengeti wekutengesa
Kana zvose zvataurwa uye zvaitwa, usakanganwa kushanda pawebsite yako pakunyoreraspeed. Vanhu vanocherechedza hazvirevi kwenguva refu, saka kana iwe webhusaiti yako inotora nguva dzose kutakura, mikana uri kurashikirwa zvikuruvatengi kupfuura iwe unofunga. Zvinogona kuva chikonzero nei webhusaiti yako isingashanduki sezvinofanira. Funga kutarisa zvinhu zvoseizvo zvingave zvingangoita zvishoma nezvishoma nzvimbo yako, kubva pazvigamba zvichienda kuhuwandu hwehuwandu hwekugovana, uye kunyange hukuru hwezvifananidzopeji yako.
Kunyange zvazvo peji yepaji nekugadzira zvakakosha, usakanganwa kuti SEO ndiyochinhu chinonyanya kukosha chinoita kuti webhusaiti yako iite. Kuratidza pane zvakaitika kune Semalt vatengi, kurega SEO mune yakokushanda basa kunogona kuita kuti kambani yako ishambadzire kushanda Source .